“Gaalkacyo ma fayooba (Xildhibaanada) iyo waa fayowdahay (Duqa Degmada)” kee ku saxan? (dhegayso) – Radio Daljir
“Gaalkacyo ma fayooba (Xildhibaanada) iyo waa fayowdahay (Duqa Degmada)” kee ku saxan? (dhegayso)
Janaayo 7, 2018 3:36 b 1
Xaalka magaalada Gaalkacyo ayaa labadii sano ee la soo dhaafay u muuqda mid aan waxba ka duwaneyn kan Bariga Dhexe iyo siyaasadda qalafsan ee ka taagan. Waa magaalo u muuqata mid aan maamulkeedu raalli iska aheyn. Waa magaalo u muuqata in dadkeedu aan weli meelna isku raaci karin. Waa magaalo u muuqata in dadkeeda hadba kii rabaa uu meeshuu rabo u jiito, waxa uu rabana u sheegto. Waa magaalo kii caqliga lahaa aad mooddid in uu afka ka xirtay. Waa magaalo la dhihi karo, “ceelna uma qodna, cidina uma maqna!”
Hadaba si aan wax uga ogaano xaalka qalafsan ee Gaalkacyo iyo maamulkeeda waxa aan wareysanay laba xildhibaan oo eed aad u kulul u soo jeediyey Duqa Degmada, Mudane Tumey, iyo kan maamulka Puntland. Sidoo kale waxa aan isla eeddaas la soo jeediyey ka warreysanay Duq Tumey.
Dhegaysi kabacdi, fadlan dhegayste nala qaybso aragtidaada ku aaddan xaalka magaalada Gaalkacyo.
Hoos ka dhegayso wareysiyada, oo aan ku hormarno wareysiga Xildhibaanada Golaha Deegaanka Degmada Gaalkacyo
Aan ku xijino Mudane Tumey, Duqa Degmada Gaalkacyo, iyo waxa uu ka yiri eedda kore ee Xildhibaanada
Siyaasadda & Dhaqaalaha 466 Wararka 18344
Odayaasha Gobolka Bari iyo Xaalka Dekedda Bossaso (dhegayso)
Ciyaaraha Gobolada Bari iyo Sanaag & Philip Coutinho oo Barca noqday (dhegayso)
Abdirahman 2 years ago
Hadaan si dhab ah uhadlo maamulka dagmada Galkaio waa maamulka ugu liito ee kashaqeeyo dagmooyinka pl oo dhan wax ilaa hada ay qabteen oo lasheegi karo ma arag